लगातार ६८ घन्टा बिरामी हेर्न खटिएका कपिलवस्तुका ‘एक्ला’ डाक्टर – Health Post Nepal
लगातार ६८ घन्टा बिरामी हेर्न खटिएका कपिलवस्तुका ‘एक्ला’ डाक्टर
२०७८ असोज २० गते १८:५८
शिवराज अस्पताल बहादुरगंजका डा. मुकेश चौधरी आइतबार साँझ ६ बजे अस्पताल छिरेका थिए। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पाँच जना झाडा–बान्ताका बिरामी आएपछि उनी जाँच गर्न अस्पताल छिरेका थिए।
उपचार गर्दागर्दै बिरामीको संख्या २१ जना पुगेको थियो। राति १० बजेसम्म झाडा–बान्ताका बिरामीले अस्पताल भरिए। शिवराज अस्पतालमा तीन जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ तर नियुक्त भएका चौधरी एक्ला चिकित्सक हुन्।
आइतबार साँझ अस्पताल पुगेका डा. चौधरी टिमसँगै उपचारमा खटिएका थिए। प्रकोप फैलिएपछि उनी बुधवार दिउँसो २ बजेसम्म नसुती उपचारमा खटिए। ‘अब निद्राले आँखा बन्द हुन लागेको छ । निरन्तर काम गर्दा ढाड पनि दुखेको छ। आइतबार साँझदेखि करिब ३०० बिरामी जाँच गरेको रहेछु । अस्पतालमा आएकामध्ये कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यसमा खुसी छु’, डा. चौधरीले भने।
३० वर्षीय चौधरी कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका– ८ मधुनगरका स्थानीय बासिन्दा हुन् । हाल अस्पतालमा उनीसहित ५६ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा खटिएका छन्। उपचारमा खटिनेमध्ये छ जना चिकित्सक, २० जना पारामेडिसिन, ३० जना नर्स र हेल्थ असिस्टेन्ट रहेका छन्। थप भएकामध्ये चार जना चिकित्सक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दुई जना कपिलवस्तु अस्पताल तौलिहवाबाट खटिएका छन्।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका वडा ७, ८ र ९ मा झाडा–बान्ता फैलिएपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार स्थिति नियन्त्रणको प्रयासमा रहेका छन्। अस्पतालको जनशक्ति र क्षमताले थेग्न नसक्ने भएपछि समुदायमा पुग्ने तयारी सुरु भएको छ।
शिवराज अस्पतालमा मात्र ३०० जनाभन्दा धेरैले उपचार गराएका छन्। तीमध्ये जटिल अवस्थामा रहेका २५ जनालाई तौलिहवा र बुटवल थप उपचारका लागि पठाइएको छ। अझै पनि अस्पतालमा १४ जना जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार भइरहेको छ।